တစ်ကိုယ်တည်းနေခြင်း အနုပညာ - For her Myanmar
တစ်ယောက်တည်း နေတော့ အထီးမကျန်ဘူးလား မေးလာတဲ့အခါ… ဒီလို ကောင်းကျိုးတွေလည်း ရနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောပြလိုက်ပါ…
နေ့စဉ်ဘဝစိတ်မွန်းကြပ်မှုတွေကြာင့်တစ်ယောက်တည်းတစ်နေရာရာကို ထွက်ပြေးချင်တဲ့စိတ်မျိုးပေါက်ဖူးကြမှာပါ။ အဲ့ဒီအချိန် လူတိုင်းလိုလို တွေးမိတာက တစ်ယောက်တည်း နေရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ ဆိုတာမျိုးပါ။ တစ်ကိုယ်တည်းနေခြင်းဆိုတာ introvert ၊ extrovert ဆိုတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် introvert တွေက တစ်ကိုယ်တည်းနေရတာမျိုးမှာ extrovert တွေထက်ပိုပြီး အသားကျနေတာမျိုးကိုတော့ တွေ့ရမှာပါ။
တစ်ကိုယ်တည်းနေခြင်းအားဖြင့် အထီးကျန်ဆန်လိမ့်မယ်လို့ ယောင်းတို့တွေးထင်မိကောင်း တွေးထင်မိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အထီးကျန်ဆန်တဲ့ လူတစ်ယောက်က ဘေးမှာ ဘယ်လောက်ပဲ အဖော်ပေါင်းများစွာရှိရှိ အထီးကျန်ဆန်စမြဲပါပဲ။ မယုံရင် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေထဲက အထီးကျန်ဆန်နေတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေကိုမေးကြည့်ပါ။ ဒါဆို လူအများကြီးနဲ့ နေတာတောင် အထီးကျန်နေရင် တစ်ကိုယ်တည်း ဘယ်လိုနေကြမလဲ? ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်မှာလဲ? သိချင်ရင် ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ဦးနော်။
၁။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နားလည်ပေးလာနိုင်တယ်။
တခြားသူတစ်ယောက်ကို နားလည်ပေးရတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နားလည်ပေးရတာထက် ပိုလွယ်ကူပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အသုံးမကျဘူးလို့ ခံစားလွန်းနေရရင် တစ်ယောက်တည်း နေလိုက်ပါ။ ကိုယ့်အတွက် အချိန်ပေးလိုက်ပါ။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်တွေကို သုံးသပ်လာမိပါလိမ့်မယ်။
၂။ လောကကြီးအကြောင်း သိလာတယ်။
သစ္စာဖောက်ခံရတာ၊ အပစ်ပယ်ခံရတာများသွားပြီး လူတွေကို ကြောက်လာတဲ့အခါ တစ်ကိုယ်တည်း နေကြည့်ပါ။ ယောင်းတို့ ကြောက်နေတဲ့ အရာက တကယ်တော့ ရိုးရိုးသာမန်ပဲဆိုတာ သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ ယုံကြည်တတ်လာလိမ့်မယ်။
Related Article >>> တစ်ကိုယ်တည်းဘဝက နေတတ်ရင် တကယ်ကို ပျော်စရာပါ။
၃။ ယုံကြည်မှု ပြည့်ဝလာတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိဘူးထင်နေရင် တစ်ကိုယ်တည်း ဘဝကို ခဏတာ ဖြတ်သန်းကြည့်ပါ။ တစ်ကိုယ်တည်း ခရီးထွက်တာမျိုး၊ တစ်ကိုယ်တည်း ပရောဂျက်တစ်ခုခု ကိုင်လိုက်တာမျိုးပေါ့။ ဒီနည်းကတော့ အနည်းနဲ့အများ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုကို မြှင့်တင်ပေးမှာပါ။
၄။ အသည်း မကွဲတတ်တော့ဘူး။
အသည်းဆိုတာတော့ လူတိုင်းကွဲဖူးကြစမြဲပါ။ အချစ်ကြောင့်နာကျင်မှုခံစားရတဲ့အခါ ပေါက်တတ်ကရတွေလျှောက်တွေး၊ လျှောက်မလုပ်ဘဲ တစ်ယောက်တည်း တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေး နေကြည့်လိုက်ပါ။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုပေါ့။ ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်စားနေပြီး၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတာမျိုးပေါ့။ အသည်းကွဲခြင်းရဲ့ အဓိကသော့ချက်ကိုနားလည်လာရင် အသည်းဆိုတာ ထပ်ကွဲမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး ယောင်းရေ။
Related Article >>> တစ်ကိုယ်တည်း နေသားကျနေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်မိတဲ့အခါ
၅။ တီထွင်ကြံဆနိုင်စွမ်း ပိုရှိလာမယ်။
တိတ်ဆိတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်က အစွမ်းအစပိုကြီးတယ် ဆိုသလိုပေါ့။ ပတ်ဝန်းကျင်က ဟိုရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်၊ ဒီရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်တွေမရှိတဲ့အခါ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်း ပိုရှိလာတာကြောင့် တီထွင်ကြံဆမှုအပိုင်းမှာလည်း သူများထက် ပိုသာလာတတ်ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်တည်း နေရခြင်းမှာ အကျိုးတွေက အများသားရယ်နော်… နောက်ပြီး တစ်ယောက်တည်း နေတယ်ဆိုတာ လူတွေနဲ့သာ ခပ်ခွာခွာ နေခိုင်းတာပါ.. အရာရာအားလုံးနဲ့ အဆက်ဖြတ်ပြီး နေခိုင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်က တိရစ္ဆာန်လေးတွေ ချစ်တတ်တယ်ဆိုရင် သူတို့လေးတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးဆော့ပေါ့.. ဒါဆို တစ်ကိုယ်တည်း နေရတာ ပိုပြီး လွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်။
တစ်ကိုယ်တည်း နေထိုင်ခြင်း အနုပညာနဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေ ယောင်းတို့ရေ…
တဈယောကျတညျး နတေော့ အထီးမကနျြဘူးလား မေးလာတဲ့အခါ… ဒီလို ကောငျးကြိုးတှလေညျး ရနိုငျတယျဆိုတာ ပွောပွလိုကျပါ…
နစေ့ဉျဘဝစိတျမှနျးကွပျမှုတှကွောငျ့တဈယောကျတညျးတဈနရောရာကို ထှကျပွေးခငျြတဲ့စိတျမြိုးပေါကျဖူးကွမှာပါ။ အဲ့ဒီအခြိနျ လူတိုငျးလိုလို တှေးမိတာက တဈယောကျတညျး နရေရငျ သိပျကောငျးမှာပဲ ဆိုတာမြိုးပါ။ တဈကိုယျတညျးနခွေငျးဆိုတာ introvert ၊ extrovert ဆိုတဲ့ကိုယျရညျကိုယျသှေးတှနေဲ့ ဆကျစပျမှုရှိပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ introvert တှကေ တဈကိုယျတညျးနရေတာမြိုးမှာ extrovert တှထေကျပိုပွီး အသားကနြတောမြိုးကိုတော့ တှရေ့မှာပါ။
တဈကိုယျတညျးနခွေငျးအားဖွငျ့ အထီးကနျြဆနျလိမျ့မယျလို့ ယောငျးတို့တှေးထငျမိကောငျး တှေးထငျမိပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေဲ့ အထီးကနျြဆနျတဲ့ လူတဈယောကျက ဘေးမှာ ဘယျလောကျပဲ အဖျောပေါငျးမြားစှာရှိရှိ အထီးကနျြဆနျစမွဲပါပဲ။ မယုံရငျ ကိုယျ့သူငယျခငျြးတှထေဲက အထီးကနျြဆနျနတေယျဆိုတဲ့ သူတှကေိုမေးကွညျ့ပါ။ ဒါဆို လူအမြားကွီးနဲ့ နတောတောငျ အထီးကနျြနရေငျ တဈကိုယျတညျး ဘယျလိုနကွေမလဲ? ဘယျလို အကြိုးကြေးဇူးတှေ ရနိုငျမှာလဲ? သိခငျြရငျ ဆကျဖတျကွညျ့လိုကျဦးနျော။
၁။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ နားလညျပေးလာနိုငျတယျ။
တခွားသူတဈယောကျကို နားလညျပေးရတာက ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ နားလညျပေးရတာထကျ ပိုလှယျကူပါတယျ။ တဈခါတလေ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အသုံးမကဘြူးလို့ ခံစားလှနျးနရေရငျ တဈယောကျတညျး နလေိုကျပါ။ ကိုယျ့အတှကျ အခြိနျပေးလိုကျပါ။ ကိုယျ့မှာရှိတဲ့ အားနညျးခကျြ၊ အားသာခကျြတှကေို သုံးသပျလာမိပါလိမျ့မယျ။
၂။ လောကကွီးအကွောငျး သိလာတယျ။
သစ်စာဖောကျခံရတာ၊ အပဈပယျခံရတာမြားသှားပွီး လူတှကေို ကွောကျလာတဲ့အခါ တဈကိုယျတညျး နကွေညျ့ပါ။ ယောငျးတို့ ကွောကျနတေဲ့ အရာက တကယျတော့ ရိုးရိုးသာမနျပဲဆိုတာ သဘောပေါကျလာလိမျ့မယျ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျခဈြပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျပဲ ယုံကွညျတတျလာလိမျ့မယျ။
Related Article >>> တဈကိုယျတညျးဘဝက နတေတျရငျ တကယျကို ပြျောစရာပါ။
၃။ ယုံကွညျမှု ပွညျ့ဝလာတယျ။
ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုမရှိဘူးထငျနရေငျ တဈကိုယျတညျး ဘဝကို ခဏတာ ဖွတျသနျးကွညျ့ပါ။ တဈကိုယျတညျး ခရီးထှကျတာမြိုး၊ တဈကိုယျတညျး ပရောဂကျြတဈခုခု ကိုငျလိုကျတာမြိုးပေါ့။ ဒီနညျးကတော့ အနညျးနဲ့အမြား ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုကို မွှငျ့တငျပေးမှာပါ။
၄။ အသညျး မကှဲတတျတော့ဘူး။
အသညျးဆိုတာတော့ လူတိုငျးကှဲဖူးကွစမွဲပါ။ အခဈြကွောငျ့နာကငျြမှုခံစားရတဲ့အခါ ပေါကျတတျကရတှလြှေောကျတှေး၊ လြှောကျမလုပျဘဲ တဈယောကျတညျး တိတျတိတျဆိတျဆိတျလေး နကွေညျ့လိုကျပါ။ ဘယျလိုနညျးနဲ့မဆိုပေါ့။ ကိုယျကွိုကျတာကိုယျစားနပွေီး၊ ကိုယျကွိုကျတဲ့ရုပျရှငျကွညျ့နတောမြိုးပေါ့။ အသညျးကှဲခွငျးရဲ့ အဓိကသော့ခကျြကိုနားလညျလာရငျ အသညျးဆိုတာ ထပျကှဲမှာမဟုတျတော့ပါဘူး ယောငျးရေ။
Related Article >>> တဈကိုယျတညျး နသေားကနြတေဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျကို ခဈြမိတဲ့အခါ
၅။ တီထှငျကွံဆနိုငျစှမျး ပိုရှိလာမယျ။
တိတျဆိတျတဲ့ သူတဈယောကျက အစှမျးအစပိုကွီးတယျ ဆိုသလိုပေါ့။ ပတျဝနျးကငျြက ဟိုရှုပျရှုပျယှကျယှကျ၊ ဒီရှုပျရှုပျယှကျယှကျတှမေရှိတဲ့အခါ အာရုံစူးစိုကျနိုငျစှမျး ပိုရှိလာတာကွောငျ့ တီထှငျကွံဆမှုအပိုငျးမှာလညျး သူမြားထကျ ပိုသာလာတတျပါတယျ။
တဈကိုယျတညျး နရေခွငျးမှာ အကြိုးတှကေ အမြားသားရယျနျော… နောကျပွီး တဈယောကျတညျး နတေယျဆိုတာ လူတှနေဲ့သာ ခပျခှာခှာ နခေိုငျးတာပါ.. အရာရာအားလုံးနဲ့ အဆကျဖွတျပွီး နခေိုငျးတာ မဟုတျပါဘူး။ ကိုယျက တိရစ်ဆာနျလေးတှေ ခဈြတတျတယျဆိုရငျ သူတို့လေးတှနေဲ့ ပြျောပြျောပါးပါးဆော့ပေါ့.. ဒါဆို တဈကိုယျတညျး နရေတာ ပိုပွီး လှယျကူလာပါလိမျ့မယျ။
တဈကိုယျတညျး နထေိုငျခွငျး အနုပညာနဲ့ အခကျအခဲတှကေို ကြျောလှားနိုငျကွပါစေ ယောငျးတို့ရေ…
Tags: alone, improve, Knowledge, Letters from Heart, Live, Single, tips
“အမေများနေ့” မှာ သားသားမီးမီးတို့နဲ့အတူတူ အမှတ်တရတွေ ဖန်တီးနိုင်ဖို့ အကြံပြုချက် (၄) ချက်
တင်သားကျစ်လျစ်လှပစေမယ့် (၁၀) မိနစ်စာ လေ့ကျင့်ခန်းများ